Fitsidihana ny faritra avaratr'i Madagasikara | Primature
Fitsidihana ny faritra avaratr’i Madagasikara
Mahazoarivo, 31 janoary 2020 – « Hijerena vahaolana vonjy maika sy haingana ny fanarenana ireo takaitra navelan’ny andro ratsy ; ary hanarina ny fari-piainan’ny Malagasy ny governemanta » hoy ny Praiminisitra Ntsay Christian raha nitsidika distrika telo tamin’ny faritra avaratr’i Madagasikara ny delegasiona notarihiny, nanomboka ny 30 janoary, dia ny distrikan’Antsohihy, Ambanja, ary Ambilobe. Nanolotra fanampiana tamin’ny alalan’ny BNGRC ny fitondram-panjakana ary nanotrona ny Lehiben’ny governemanta tamin’izao diany izao ny minisitry ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana, ny sekreteram-panjakana miadidy ny Zandariamariam-pirenena, ary ny Minisitry ny Fanajariana ny Tany sy ny asa Vaventy.
Nitafa tamin’ireo tomponandraikitry ny sampandraharaham-panjakana sy ny avy amin’ny sehatra tsy miankina tao amin’ireo distrika notsidihina ny delegasiona, ary nihaino ihany koa ny hetahetan’ny vahoaka tany an-toerana. Nambaran’ny Praiminisitra, mikasika ny lalam-pirenena faha-6, fa efa nandray andraikitra ny fitondram-panjakana tamin’ny famerenena ny lalana, efa nisy hoy izy ny fandefasana ireo orinasa manamboatra ny tetezana ao Mahajamba sy ao Ifasy ary efa misokatra ny lalana amin’izao fotoana izao. Notsiahiviny tao Ambanja fa nanome toky ny hanamboarana manontolo ny lalam-pirenena faha-6 ny Filohan’ny Repoblika, ary vao tsy ela no vita ny fifanaovan-tsonia momba izany niaraka tamin’ny mpamatsy vola, ka hatomboka ny fanamboarana raha vao tapitra ny fotoam-pahavaratra. Ankoatra izay dia hamboarina ny lalana mirefy 50km mampitohy an’Ambanja sy Andoharano; ary ny ao an-tampon-tananan’Ambilobe hatrany amin’ny orinasa Sirama. Misy anefa, hoy ny Praiminisitra, ny tranga fanimbana lalam-pirenena: “be loatra ireo fangalarana ny fantsona fanarian-drano amin’ny lalana ka manapotika ny lalana izany”. Efa misy hoy izy ny fandraisana andraikitra amin’ny fitadiavana ny olona nahavanona an’izany halatra izany satria “raha hanarina ny lalana isika nefa mbola ho potika ny lalana ny ampitso dia ho very maina ny ezaka hatao”. Izay no mahatonga antsika manova ny fitantanana amin’izao fotoana izao, mba tena hahomby ny zavatra hatao rehetra, hoy ihany ny Praiminisitra. Mikasika ny fisokafan’ny lalam-pirenena ihany dia nanazava ny Praiminisitra fa nanaovan’ny fitondram-panjakana ezaka manokana izany satria “raha tsy misokatra ny lalana dia tsy ho voafehy ny vidin’entana”, ka teo no nanaovany antso avo tamin’ireo tompon’andraikitra rehetra any amin’ny Faritra Sofia, indrindra ny avy amin’ny sehatra tsy miankina amin’ny fanjakana, mba tena hitsinjo ny vahoaka ary tsy hiditra amin’ny fanararaotana. Nanome hafatra ho an’ireo mpandraharaha ara-barotra any an-toerana ihany koa ny Praiminisitra mba tsy hanararaotra amin’ny fampiakarana ny vidin’entana fampiasa andavanandro fa hitazona ny vidiny ara-dalàna.
Ho an’Ambanja manokana dia nampahafantatra ny Praiminisitra fa ny fitondram-panjakana dia hanome « émetteur radio » ho an’ny haino aman-jerim-panjakana amin’ny herinandro ho avy izao, ary fiarabe hitaterana fako ho an’ny kaominina mba hanadiovana ny tanàna ho fanampiana ny ezaka ataon’ny Ben’ny tanàna vaovao. Vonona ihany koa ny fitondrana hanampy amin’ny resaka fandriampahalemana, indrindra ho fiarovana ny sehatra fitrandrahana lavanila any an-toerana. Notsindrian’ny ministry ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana tao anatin’izany fa tafiditra ao anatin’ny vinan’ny ministera iandraiketany ny fitsinjaram-pahefana tena izy ka omena vahana amin’izany ireo mpitondra eny anivon’ny fokontany.
Nandritra ny fitsidihana ihany koa no nanomezan’ny Praiminisitra hafatra ho an’ireo tomponandraikitra rehetra any an-toerana mba tsy hanao gaboraraka fa handray ny andraikitra amin’ny asa nampandraiketana azy, nambarany fa tsy ekena intsony ny mpiasam-panjakana tsy mandray ny andraikiny, indrindra manoloana ny ady amin’ny kolikoly. Eo koa ny fahitsiana sy ny fahendrena tokony hananana satria ny mpiasam-panjakana dia mpiasam-bahoaka, hoy ihany izy. Notsindriany fa matoa mbola misy ireny kolikoly ireny dia na tsy mahay ny asany ny lehibe, na miray tsikombakomba koa ny lehibe, ka izay no mahatonga antsika amin’izao fotoana izao, mitaky fandraisana andraikitra mahomby avy amin’ireo izay nomena fahefana, izay notendrena rahateo mba handrindra ny asa amin’ny sehatra rehetra. Ho setrin’izany, hoy ny Praiminisitra, dia hametrahana mpanara-maso ho an’ireo tompon’andraikitra izay tsy mitandrina, manao kolikoly, manao tsindry hazo lena ; ary hisy ny fepetra sy ny sazy henjana ho an’izay mbola minia mandika ireo toromarika ireo.
Tao anatin’ny fitsidihana hatrany dia nitondra teny ho an’ny rehetra ireo telo mirahalahy mpikambana ao amin’ny governemanta : ho an’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria dia nohamafisiny ny filamatr’izy ireo: “ny dahalo sy jiolahy ary ny mpanaraka azy no atao mihorohoro”; ho an’ny minisitry ny Asa vaventy sy ny Fanajariana ny tany kosa dia ny fanarenana ireo làlana simba no vaindohan-draharaha; ary ho an’ny minisitry ny Atitany sy Fitsinjaram-pahefana dia ilaina ny fampandraisana andraikitra ny tsirairay, ary mitaky fanovan-tsaina izany.
← Famindram-pitantanana teo amin’ny ministeran’ny Raharaham-bahiny
Fitsidihana tao Antsiranana : Miainga eny ifotony ny fampandrosoana an’i Madagasikara →